Xijaar oo beeniyay in Ciidamo la geeyay Garoonka diyaaradaha | KEYDMEDIA ONLINE
Xijaar oo beeniyay in Ciidamo la geeyay Garoonka diyaaradaha
Afhayeen u hadlay taliska ciidamada Booliska ayaa sheegay in aan ciidamo dheeraad ah la geyn garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde Airport ee magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa beeniyay wararka la isla dhex marayay maalmihii udambeeyay ee ahaa in ciidamo dheeraad ah gaar ahaan kuwa loo yaqaan Haramcad la geeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Madasha Badbaado Qaran oo looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ayaa shalay waraaq furan u diray Beesha Caalamka waxayna ku sheegtay in garoonka diyaaradaha loo qorsheeyay in lasoo dhoobo ciidamo ka amar qaata Saadaq John oo ka tirsan ciidanka Booliska gaar ahaan kuwa Haramcad.
Afhayeen u hadlay taliska ciidanka Booliska ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidamo hor leh oo lagu daabulay garoonka Aadan Cadde, Sida uu sheegay Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa saldhigga garoonka Addan Cadde hoos gooyey taliska qeybta guud ee gobolka Benaadir, kaas oo markii hore ahaa mid madax-banaan.
“Waxaan xaqiijinayaa in hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed aysan wax ciidamo cusub ama dheeraad ah ku daabulin garoonka Aadan Cadde,” ayuu yiri afhayeen u hadlay Booliska oo qoraal kooban soo dhigay barta uu ky leeyahay Twitter-ka, waxa uu intaa raaciyay “Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, kuwa AMISOM iyo kuwa kale ee amniga kala shaqeeya aaga loo qoondeeyay inay ku shaqeeyaan ayaa howlahooda shaqo ee maalinlaha ah qabanaya.”